Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Goiana Frantsay
Goiana Frantsay RSS
Tahiry isam-bolana Febroary 2013 1 Lahatsoratra Desambra 2008 2 Lahatsoratra
Oktobra 2007 1 Lahatsoratra Tantara mikasika ny Goiana Frantsay 07 Febroary 2013
03 Desambra 2008
Goyana Frantsay: Fitokonambe tsy misy milaza Mpanoratra Fabienne Flessel · Fanoherana Nisafotofoto ny toe-draharaha any amin'ny faritry Goyana Frantsay efa herinandro mahery izay. Manohitra ny fiakaran'ny vidin'ny lasantsy amin'ny alalan'ny fametrahana barazy manerana ny lalana, fanakatonana ny sekoly sy orinasa ny mponina. Amin'izao fotoana izao dia €1,77 isaky ny litatra ny vidin'ny lasantsy (US$ 2,25), izay mifandaka amin'ny fidinan'ny solika izay... 06 Oktobra 2007
Fahafatesan'ny fiteny : vokatry ny lalànan'ny fivoarana, sa làlam-javaboahary, sa famotehana ? Mpanoratra Jennifer Brea · Frantsa Isika zanak'olombelona dia miaina anivon'ny firenena miisa 194 fotsiny, aleo angaha atao hoe na mihoatra kely na latsaka kely, anefa dia ny fitenintsika dia anelanelan'ny 7'000 sy 8'000 isa. Mihena an-toerana anefa ireny fiteny maro samihafa ireny. Tombatombanana ho fiteny iray no manjavona isan-tapa-bolana. Zato taona lasa izay, firenena Erôpeana...